Minisitry ny Tetibola vaovao : Ny fanompoana ny firenena no laharam-pahamehana -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitry ny Tetibola vaovao : Ny fanompoana ny firenena no laharam-pahamehana
Vantany vao tontosa ny fanambarana ôfisialy ny fametraham-pialan’ny minisitry ny Tetibola sy ny Fitantanam-bola teo aloha, Gervais Rakotoarimanana, ny alatsinainy 17 jolay teo, avy hatrany dia voatendry ny solony, omaly 18 jolay.
Araka izany, voatendry nandritra ny filan-kevitry ny minisitra, hitantana indray ny ministeran’ny Tetibola sy Fitantanam-bola (MFB), Ramatoa Vonintsalama Andriambololona Sehenosoa. Tsy niandry ela anefa fa tontosa omaly avy hatrany ihany koa ny fifanaovan-tsonia ny fifamindram-pahefana teo amin’ireo minisitra nametra-pialana sy ny minisitra vaovao.
Raha ho an’ity ministera ity manokana, somary nanahirana ireo andrim-panjakana isan-tokony ny niara-niasa tamin’ny minisitra teo aloha, Gervais Rakotoarimanana. Tsy hita taratra mantsy nandritra ny roa taona sy tapany nitantanany ny MFB ny tena fampandrosoana ny firenena fa toa lasa nirona misimisy kokoa tamin’ny fanompoana ireo mpamatsy vola mahazatra, izay toa mampifilafila amin’ny fanomezam-bola ary raha mamoaka vola dia mitsitaitaika izany, sns.
Ny mifanohitra amin’izay indrindra kosa no ho tazana amin’ity minisitry ny Tetibola sy Fitantanam-bola vaovao ity. Hitondra fisokafana vaovao ho an’i Madagasikara ny minisitra Vonintsalama Andriambololona Sehenosoa. Hitondra ny traikefany ho amin’ny fanompoana sy fampandrosoana ny firenena ihany koa amin’ny alalan’io andraikitra vaovao nankinin’ny Fitondram-panjakana aminy io. Izany hoe, hitondra ny tsara indrindra avy any aminy izy ho tombontsoan’ny firenena sy ny vahoaka. Ny fari-pahaizana sy ny traikefa nananany koa dia efa ampy hisahanany an’izany. Ny fanompoana ny firenena no laharam-pahamehana ho azy.
Ankoatra izay, tsy vaovao amin’ny minisitra Vonintsalama Andriambololona Sehenosoa ity ministera tantaniny manomboka izao ity satria efa nitana ny andraikitry ny sekretera jeneraly teo anivon’ny MFB ihany ny tenany tany aloha. Mpitantana ambony eo anivon’ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM). Efa nitana ny andraikitry ny tale jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana ihany koa. Noho izany, efa mifankahalala tsara amin’ireo mpiasa eo anivon’ny ministera tantaniny ity minisitra ity ary mahafehy tsara ny fitantanana noho ireo andraikitra maro efa nosahaniny manodidina ity ministera tantaniny ity.
5 enlargement Tips To Help You Get Started your Current Penis Size Today! dans Sortie de Air Madagascar de l’annexe B
5 enlargement Tips To Help You Get Started your Current Penis Size Today!: Greetings, There's no doubt that your web site may be having web browser compatibility problems. Whenever I take a…